Mar 2 | Shona | STEP | Akapindazve Kapernaume pashure pamamwe mazuva zvikazikamwa kuti uri mumba.
(Mat. 9.1-8, Ruka 5, 17-26.)
1 Akapindazve Kapernaume pashure pamamwe mazuva zvikazikamwa kuti uri mumba. 2Pakarepo vazhinji vakavungana nokudaro vakashaiwa nzvimbo, kunyange pamukova, akaparidza shoko kwavari. 3Vakavuya vakaisa kwaari munhu wakanga akafa mitezo, akatakurwa navanhu vana. 4Zvino vakanga vasingagoni kuswedera kwaari nokuda kwavazhinji, vakazarura denga paakanga ari, vakati variputsa vakaburusa nhovo pakanga pavete munhu wakanga akafa mitezo. 5Jesu wakati achivona kutenda kwavo akati kunowakanga akafa mitezo, mwana wakangamwirwa zvivi zvako. 6Zvino vamwe vanyori vakanga vageremo vakafunga mumoyo yavo vachiti, 7uyu unorevereiko kudaro? Unomhura Mwari, ndianiko unogona kukanganwira zvivi asi mumwe chete ndiye Mwari? 8Pakarepo Jesu achiziva mumweya make kuti vanofunga kudaro mumoyo yavo akati kwavari, munofungireko zvinhu izvi mumoyo yenyu? 9Chinyiko chakareruka kuti kunowakafa mitezo, wakanganwirwa zvivi zvako kana kuti simuka tora nhovo dzako ufambe? 10Asi kuti muzive kuti Mwanakomana womunhu unesimba panyika rokukanganwira zvivi, akati kumunhu wakanga akafa mitezo. 11Ndinoti kwauri, simuka tora nhovo dzako, uende kumba kwako! 12Pakarepo akasimuka akatora nhovo, ndokubuda pamberi pavo vose. Naizvozvo vose vakashamiswa vakarumbidza Mwari vachiti, hatina kumbovona zvakadai.
(Mat. 9, 9-13; Ruka 5.27-32.)
13Wakabudazve akaenda kugungwa, vazhinji vose vakavuya kwaari akavadzidzisa. 14Wakati achipfuvura akavona Revhi mwanakomana waArfeo agere panotereswa, akati kwaari, nditevere. Akasimuka akamutevera. 15Zvino wakati agere pakudya mumba make, vateresi vazhinji navatadzi vakagara naJesu navadzidzi vake nokuti vakanga vari vazhinji vaimutevera. 16Zvino vanyori navaFaraise vakati vachimuvona achidya navatadzi navateresi vakati kuvadzidzi vake, mudzidzisi unodyireiko navateresi navatadzi? 17Jesu wakati achizvinzwa akati kwavari, usingarwari haatsvaki chiremba asi unorwara. Handina kuvuya kuzodana vakarurama asi vatadzi kuti vatendevuke.
(Mat, 9. 14-17;R uka 5. 33-39.)
18Vadzidzi vaJohane navaFarisi vakanga vachizvinyima zvokudya, vakavuya vakati kwaari, vadzidzi vaJohane navadzidzi vavaFarise vanozvinyimireiko zvokudya asi vadzidzi venyu havazvinyimi neiko? 19Jesu akati kwavari, shamwari dzechikomba dzingazvinyima zvokudya seiko chikomba chichiri kwavari? Havangazvinyimi zvokudya chikomba chichiri kwavari. 20Asi mazuva achasvika achazobviswa chikomba kwavari, zvino nenguva iyo vachazvinyima zvokudya. 21Hakuno munhu unosonera chiremo chitsva panguvo yakasakara nokuti chiremo chitsva chinobvarura nguvo yakasakara vuri rikanyanya. 22Hakunomunhu unodira waini itsva muhombodo tsaru nokuti waini inoparusa hombodo, waini nehombodo zvikafa asi waini itsvainodirwa muhombodo itsva.
(Mat. 12. 1-8; Ruka 6. 1-5.
23Wakati achifamba muminda, nomusi wesabata, vadzidzi vake vakatanga kutanha hura vachifamba. 24VaFarise vakati kwaari, tarirai vanoitireiko zvisina kutenderwa nomusi wesabata? 25Akati kwavari, hamunakurava here zvakaitwa naDhavhidhi musi waakanga ashaiwa, aziya, iye navakanga vanaye? 26Kuti wakapinda mumba maMwari, Abhiatari ari muPirisita mukuru akadya zvingwa zvokuratidza zvakanga zvisina kutenderwa kudyiwa asi navaPirisita voga, akapavo vaivanaye? 27Akati kwavari, sabata yakaitirwa munhu, munhu haana kuitirwa sabata. 28Naizvozvo Mwanakomana womunhu ndiye Ishe wesabatavo.